တုန်ခါနေတဲ့ – Grab Love Story
မော်ကြီး ဇော်ဝိတ်တို့အိမ်ကို အ၀တ်တထည် ကိုယ်တခုနဲ့ ရောက်ခဲ့တာပါ ။ ငယ်သူငယ်ချင်း ဆိုတဲ့ သံယောဇဉ်နဲ့ ဇော်ဝိတ်က မော်ကြီးကို သူတို့အိမ်မှာ နေဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့တယ် ။ ဇော်ဝိတ်ရဲ့ မဟေသီ မသက်ကလည်း မော်ကြီးအပေါ် ဟိုးအရင်ထဲက ကောင်းတယ် ။ သူတို့ အိမ်ကို လာရင် ရှိတာအကုန်ချကျွေး ပွင့်လင်း သဘောကောင်းခဲ့တယ် ။ အခုဟာက မော်ကြီးလို ထောင်က ထွက်လာတဲ့လူတယောက်ကို သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေက ကူညီဖို့ လက်ခံဖို့ မပြောနဲ့ ဆေးဖေါ်ကြောဖက်တောင် လုပ်ချင်ကြတာ မဟုတ်ဘူး ။ ဇော်ဝိတ်တို့ လင်မယားကတော့ အရင်က အတိုင်းဘဲ ။ နေစရာပေး ထမင်းကျွေးထားတယ် ။ ဇော်ဝိတ်ကဘဲ မော်ကြီးကို အလုပ်ရှာပေးတယ် ။ သူအလုပ်များတဲ့ကြားက သူ့မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေဆီက အလုပ် လိုက်တောင်းပေးတယ် ။ တပတ်လောက်အတွင်း မော်ကြီး အလုပ်ရသွားတယ် ။ ဇော်ဝိတ်က ကားရောင်းတယ် ။ လမ်းဘေးပွဲစား မဟုတ်ဘူး ။ ရှိုးရွန်းနဲ့ ပြရောင်းတာ ။ နိုင်ငံခြားကနေ မှာပြီး တင်သွင်းပြီး ရောင်းတာ ။ မသက်က စားသောက်ဆိုင်လေး ဖွင့်ထားတယ် ။ အိမ်နဲ့တော့ နည်းနည်း ဝေးပေမယ့် လူစည်ကားတဲ့ နေရာကောင်းမှာမို့သွားဖွင့်တာ ။ မောင်တထမ်း မယ်တရွက် ဆိုသလို လင်ရော မယားရော မနက်မိုးလင်းပြီ ဆိုရင် ကားကိုယ်စီနဲ့ အလုပ်တွေဆီကို ပြေးကြရော ။ ကြုံရာ ဆိုင်မှာ ဘရိတ်ဖတ်စ် ၀င်စားကြတယ် ။ ဇော်ဝိတ်နဲ့ မသက်မှာ အေးမိ ဆိုတဲ့ ဆယ့်ရှစ်နှစ်အရွယ် သမီးတယောက် ရှိတယ် ။ အေးမိက သိပ် အလှကြီး မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်လုံးက သူ့အမေ မသက်လိုဘဲ အချိုးအစား ကျ ပြေပြစ်တယ် ။ တောင့်တယ် ။ အေးမိက မသက်ရဲ့ သမီးလို့ မပြောရဘူး ။ ပြင်တတ်ဆင်တတ်တယ် ။ ခေတ်မှီပုံစံနဲ့ ဈေးအကြီးစား အ၀တ်အစားတွေ ၀တ်တယ် ။ အိမ်မှာနေရင်းတော့ ဖြစ်သလို ကပိုကရို ဘဲ နေတယ် ။ ဇော်ဝိတ်ရဲ့ အိမ်မှာ နေရတာ ဖွံ့ဖြိုးတောင့်တင်း အချိုးကျနဲ့ မသက်နဲ့ အေးမိတို့နဲ့ နီးနီးစပ်စပ် ရှိလွန်းတာမို့ မော်ကြီး စိတ်နည်းနည်းညစ်တယ် ။ တတ်နိုင်ရင် စည်းမဖေါက်ချင်ဘူး ။ မသက်ကလည်း တကယ့်ကို ဆက်ဆီ ။ ဖင်တောင့်တောင့်ကြီးတွေကို ဇော်ဝိတ် ဖြိုနိုင်ရဲ့လားတောင် မသိဘူး ။ မသက်ရဲ့ ဖင်ကြီးတွေကို ခိုးကြည့်ရင်း မော်ကြီး တဏှာကြွကြွနေရတယ် ။ နို့ကြီးတွေကလည်း လုံးတင်းထွားလွန်း ပြီး အိမ်မှာနေရင်း ဘရာစီယာ မပါဘဲ ဘလောက်စ်ပါးပါး ၀တ်တဲ့အခါ မော်ကြီး အရမ်း စိတ်ထရတယ် ။
မော်ကြီးက မိန်းမနဲ့ ပတ်သက်လာရင် စည်းရှိတဲ့ကောင် မဟုတ်ဘူး ။ နယ်မှာနေတုံးက ပေါင်းတဲ့ ဘော်ဒါတွေက မော်ကြီးဟာ တွေ့မရှောင်ကောင်..အပေါက်မြင်သမျ ၀င်အောင်းတတ်တဲ့ ကြွက်ဆိုးတကောင် ဆိုတာသိကြတယ် ။ ဇော်ဝိတ်ကတော့ ကောလိပ်ကျောင်း ရောက်မှ ခင်မင်ကြတဲ့ ဘော်ဒါ ဆိုတော့ သူ့ အကျင့်ဗီဇကို အသေအချာ မသိဘူး ။ မသိလို့လည်း တောင့်တဲ့ မိုက်တဲ့ ဇနီးနဲ့ သမီး ရှိတဲ့ သူ့အိမ်ကို လာနေဖို့ လက်ခံလိုက်တာပေါ့ ။ မော်ကြီးရဲ့ အလုပ်က စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်နေတဲ့ သူဌေးကြီးတယောက်ဆီမှာ လုပ်ရတာ ။ ကားမောင်းပေးရတယ် ။ သူဌေးနဲ့ လိုက်ပေးရတယ် ။ ကူဖေါ်လောင်ဖက် လို့ ပြောမလား ။ ဒရိုင်ဘာလို့ ပြောမလား ။ ဘော်ဒီဂတ် သဘောမျိုးပေါ့ ။ မသက်က အိမ်မှာ မချက်နိုင်ဘူး ။ အချိန်မရှိဘူး ။ အေးမိက တခါတလေ ချက်တယ် ။ မသက်က သူ့ဆိုင်က စားစရာတွေ ဟင်းတွေကို အိမ်ကို ယူလာပြီး ရေခဲသေတ္တာ ထဲမှာ ထည့်ထားပေးတယ် ။ စားချင်တဲ့လူ စား ဆိုပြီး ။ စားခါနီးမှာ မိုက်ခရိုဝေ့အာဗင်နဲ့ နွှေးစားကြတယ် ။ အေးမိကလည်း မော်ကြီးကို ခင်တယ် ။ မော်ကြီး နေတဲ့ ကားဂိုဒေါင် အပေါ်ထပ်လေးကို ခဏခဏ လာလည်တယ် ။ ဦးဦး..ဦးဦး ဆိုပြီး ဟိုဟာခိုင်း ဒီဟာခိုင်းနဲ့ ။ ပွတ်သီးပွတ်သပ်နဲ့ ။ အေးမိနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မော်ကြီးရဲ့ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားမိတာ ခဏ ခဏဘဲ ။ ကိုယ့်ကို နေစရာပေး အလုပ်ရှာပေးတဲ့ ကျေးဇူးရှင် သူငယ်ချင်းရဲ့ သမီးကို တိတ်တခိုး ပြစ်မှားနေမိတယ် ။ အေးမိရဲ့ဒီဇိုင်းက အချိုးကျ ဆူဖြိုးကော့တင်းနေတော့ မော်ကြီးရဲ့ စိတ်တွေ ဖေါက်ပြန်တာ အရမ်းဘဲ ။ ဆယ့်ရှစ်နှစ်မလေး ဆိုတော့ နုဖတ်စိုပြေလွန်းနေတယ် ။ သူနဲ့ အိမ်မှာ နီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေတာကို ဇော်ဝိတ်နဲ့ မသက်တို့က စိတ်မပူကြဘူး ။ သမီး ဦးဦးနဲ့ ညနေစာ အတူတူ စားလိုက်ကြ..သွားစရာ တခုခု ရှိရင်လည်း မော်ကြီးကို လိုက်ပို့ခိုင်းလိုက် ဆိုပြီး စိတ်ချကြတယ် ။ မော်ကြီး စိတ်ရိုင်းတွေ ၀င်နေတယ် ဆိုတာကို သူတို့ မရိပ်စားမိကြဘူး ။ အေးမိလေး အိမ်မှာ ရှိတာတွေကို မစားချင်ဘဲ အပြင်ထွက် စားချင်လို့ရှိရင် မော်ကြီး လိုက်ပို့ပေးရတယ် ။ ဒီအချောစားလေးနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ ကားနဲ့ ညဖက်ကြီး အပြင်ထွက်ရတဲ့အခါ မော်ကြီးရဲ့ စိတ်တွေ တအား ဖေါက်ပြန်မိတာ အမြဲပေါ့ ။
သူဌေးနဲ့ ကားမောင်းပေး အတူလိုက်နေရတဲ့ မော်ကြီးက အိမ်ပြန်ချိန် မမှန်ဘူး ။ တခါတလေ ညနက်မှ ပြန်ရောက်တတ်သလို တခါတလေလည်း စောစော ပြန်ရတယ် ။ သူဌေးရဲ့ အပေါ်မှာဘဲ မူတည်တယ် ။ သူဌေးက မြန်မာပြည်ထဲ ခရီးသွားရင် မော်ကြီးကို ကားမောင်းခိုင်းပြီး လိုအပ်တာတွေ လုပ်ကိုင် မစပေးရပေမယ့် သူ နိုင်ငံခြားကို ခရီးထွက်ရင်တော့ မော်ကြီး မလိုက်ရဘူး ဆိုတော့ နားရက်ရတယ် ။ ဇော်ဝိတ်နဲ့ မသက်က အလုပ်သွားနေကြတဲ့အချိန် အိမ်မှာ မော်ကြီးနဲ့ အေးမိတို့ နှစ်ယောက်ထဲ ရှိနေတတ်တယ် ။ အေးမိက အိမ်မှာနေရင်း တီရှပ်ပါးပါးကို အထဲက ဘာမှ မခံဘဲ ၀တ်တတ်တယ် ။ အားကစားဘောင်းဘီတို ပွပွကြီးကိုလည်း ၀တ်တတ်တယ် ။ ပေါင်တန်ဖြူဖြူတွေကို တွေ့ရတာက မော်ကြီးရဲ့ စိတ်ရိုင်းတွေကို လှုပ်ရှားထကြွစေတယ် ။ ရင်သားစိုင်ကြီးတွေကလည်း အေးမိရဲ့ ကိုယ်လုံးလေး ယိမ်းနွဲ့လိုက်တဲ့အခါ တုန်လှုပ်သွားကြလို့ မကြည့်ဘဲ မနေနိုင်တဲ့ မော်ကြီးဟာ ပေါင်နှစ်ဖက်ကြားက ဖွားဖက်တော် တန်ဆာကြီး ထောင်ထ တင်းမာကြီးထွားလာရပြီး စိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲ ၀ုန်းပစ်လိုက်ချင်စိတ်တွေ ၀င်ဝင်လာတယ် ။ သားရေပေါ်အိပ် သားရေနားစား ကျေးဇူးရှင်တွေကို ကျေးစွပ် မလုပ်သင့်ဘူး ဆိုပြီး စိတ်ထိန်းနေရတယ် ..။ ဒီနေ့ မော်ကြီးကို သူဌေးက ပြန်ခွင့်ပေးလိုက်လို့ အိမ်ကို စောစော ပြန်ရောက်လာတယ် ။ သူနေတဲ့ ကားဂိုဒေါင် အပေါ်ထပ် အခန်းလေးကို မတက်ခင် အိမ်ထဲမှာ အေးမိ ရှိသလား တချက် ကြည့်လိုက်တယ် ။ အေးမိကို မတွေ့လို့ အိမ်အနောက်ဖက်ကို သူ ၀င်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ရေချိုးခန်းဖက်ဆီက ရေသံတွေကို ကြားလိုက်ရလို့ အေးမိ ရေချိုးနေတာ သိလိုက်ရတယ် ။ အေးမိက ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ခပ်ပေါ့ပေါ့ နေတတ်တဲ့ ကောင်မလေးမို့တယောက်ထဲ ရှိနေတဲ့အချိန် ရေချိုးခန်း တံခါးကို သေသေချာချာ မပိတ်ဘူး ။ဟတတလေး ဖြစ်နေလို့ မော်ကြီးအထဲကို ချောင်းကြည့်လိုက်တယ် ။ သူ့ဖက်ကို ကျောခိုင်းပြီး ရေချိုးနေတဲ့ အေးမိကို မိမွေးတိုင်း ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ မြင်လိုက်ရတာ မော်ကြီး တုန်တုန်ရီရီ ဖြစ်သွားတယ် ။ အချိုးကျလှတဲ့ ကိုယ်လုံး ။ ခါးသေးရင်ချီ တင်က ကားတယ် ။ လုံးတယ် ။
လက်နှစ်ဖက်နဲ့ တကိုယ်လုံးကို ပွတ်သပ်ပြီး ချိုးနေတာ ရင်သားစိုင်ကြီးတွေက တုန်ခါလှုပ်နေတာကို စိတ်ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ တွေ့နေရတယ် ။ရင်သီးလုံးလေးတွေက စူထွက် ဖူးကြွနေကြတယ် ။ ခါးကေးလေးရဲ့ အောက်က တင်ပါးအိအိကြီးတွေက လုံးကားနေကြတယ် ။ ရေချိုးခန်းထဲကို ပြေးဝင်သွားလိုက်ပြီး စိတ်ရှိလက်ရှိ နမ်းစုတ်ကိုင်ညှစ်လိုက်ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်လာတယ် ။ မော်ကြီး….မကောင်းဘူး..စိတ်ထိန်း….စိတ်ထိန်း…..လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးပြီး ခြာကနဲ လှည့်ထွက်လိုက်ရတယ် ။သူ့ထပ်ခိုးအခန်းကို ရောက်တဲ့အခါ သူ့ မျက်လုံးထဲမှာ အေးမိရဲ့ အမွှေးရှင်းထားလို့ ဖြူဖွေးခုံးမို့ပြောင်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို မြင်ယောင်နေမိတယ် ။ သူ့တန်ဆာကြီးက သံမဏိချောင်းကြီးလို မာကြောနေသည် ။ အခုဘဲ ပစ်လွှတ်တော့မယ့် တိုက်ချင်းပစ် ဒုံးပျံတစင်းလို မတ်မတ်ထောင်နေတယ် ။ ၀တ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီကို ချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး တန်ဆာကို ဆုပ်ညှစ်ပွတ်တိုက်မိတယ် ။ အသက်ကြီးလာမှ ကွင်းတိုက်မိရပြီ ။ ဒီအချိန်မှာ သူ့ထပ်ခိုးအခန်းလေး တံခါးဝကနေ ဦးဦး..လို့ ခေါ်လိုက်တဲ့ အေးမိရဲ့ အသံကြောင့် ကွင်းတိုက်ရက်ကြီး သူ ဆတ်ကနဲ တုန်သွားတယ် ။ ဟယ်..ဦးဦး..ကိုယ်တုံးလုံးကြီး…ဘာလုပ်နေတာလဲ…မာစတာဘိတ် လုပ်နေတာလား….လို့ အေးမိက မေးရင်း သူ့အနားကို ရောက်လာတယ် ။ အေးမိသည် ထိုးဖေါက်မြင်ရတဲ့ ည၀တ်အင်္ကျီပါးလေးကို အထဲက ဘာမှ ခံမထားဘဲ ၀တ်ထားတယ် ။ လုံးဝန်းတဲ့ ရင်စိုင်တွေနဲ့ ရင်သီးလုံးလေးတွေကို အတိုင်းသား မြင်တွေ့နေရတယ် ။ မတ်တပ် ထရပ်လိုက်တယ် ။ အေးမိနဲ့ သူနဲ့ တထွာတောင် မဝေးဘူး ။ နီးကပ်လွန်းနေတယ် ။ ဦးဦးဟာက အကြီးကြီးဘဲ…..အေးမိ က သေသေချာချာ ငုံ့ကြည့်ရင်း ပြောလိုက်သည် ။ အေးမိ…. ဦးဦး…… အေးမိရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်နေတယ် ။ မော်ကြီး စိတ်တွေ လွတ်ထွက်သွားတယ်။ အေးမိရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ဖိကပ်စုတ် အေးမိရဲ့ ည၀တ်အင်္ကျီလေးကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ ည၀တ် အင်္ကျီလေး ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ပုံကျသွားတယ် ။ အေးမိ လည်း သူ့လိုဘဲ ဗလာကျင်းသွားတယ် ။
မိမွေးတိုင်း ကိုယ်လေးက အချိုးအဆက်ကျပြီး လှလွန်းနေတယ် ။ မော်ကြီးလည်း သူစုတ်နမ်းတာတွေကို အေးမိ တုံ့ပြန်လာတာကို သတိထားမိ တယ် ။ အေးမိရဲ့ တင်ပါးအိအိတဖက်ကို ဆုပ်ညှစ်ရင်း ကုတင်လေးပေါ်ကို ဆွဲခေါ်သွားမိတယ် ။ ဦးဦး…. အေးမိကို ချစ်လားဟင်…. အင်း…ချစ်တယ်…… အေးမိလည်းလေ..ဦးဦးကို ချစ်နေတယ်..သိလား…… မော်ကြီးသည် ကိုယ့်ကျေးဇူးရှင် ငယ်သူငယ်ချင်းကို ကျေးစွပ်နေမိပြီ ဆိုတာ သိပေမယ့် ကာမစိတ်ရိုင်းက သူ့ကို အနိုင်ယူသွားပြီ ။ အေးမိရဲ့ တင်းမာလုံးဝန်းတဲ့ ရင်သားကြီးတွေကို လက်တဖက်က ကိုင်ဆုပ် ညှစ်နယ်နေသလို နောက် လက်တဖက်က အေးမိရဲ့ ပေါင်ကြားထဲကို ကိုင်စမ်းလိုက်တယ် ။ ကာမရှေ့ပြေး အရည်တွေ ရွှဲရွှဲစိုနေတဲ့ အေးမိရဲ့ အင်္ဂါစပ် အကွဲကြောင်း ကို သူ့လက်ချောင်းတွေက ပွတ်သပ်နေတယ် ။ အေးမိရဲ့ ပေါင်တန်တွေ ဘေးကို ကားသွားတယ် ။ မော်ကြီး ပေါင်ကြားမှာ နေရာယူလိုက်ပြီး သူ့လိင်တန်ကို အေးမိ အကွဲကြောင်းက အပေါက်မှာ တေ့ထောက်လိုက်ပြီး ဖိသွင်းလိုက်တယ် ။ အိုး….ဦး…. လိင်တန်က တထစ်ထစ်နဲ့ တိုးဝင်သွားတယ် ။ တအား တင်းကြပ်နေတယ် ။ ဖိဖိထိုးတိုင်း အေးမိရဲ့ ညည်းသံလေး ထွက်နေတယ် ။ ရင်သားတွေကို နမ်းလိုက် ရင်သီးလေးတွေကို စို့လိုက် တင်ပါးအိအိကြီးတွေကို ညှစ်လိုက် လုပ်နေရင်း ဖိဖိထိုးနေတယ် ။ အား…..ဦး…ဦး…ဖြည်းဖြည်း..တအားကြမ်းတယ်ကွာ….. တအားဆောင့်ထည့်နေမိတယ် ။ အေးမိရဲ့ အော်သံက ကျယ်လွန်းတယ် ။ ဖပ်ဖပ်ဖပ်ဖပ် အသံတွေ မော်ကြီးရဲ့ အသက်ရှူအားယူသံတွေ….အေးမိရဲ့ ညည်းသံတွေ…… လိင်တန် တဆုံး ထိုးသွင်းကပ်ထားတဲ့အချိန် သူလမ်းဆုံးကိုတက်ရောက်မိသွားတယ် ။ သုတ်ရည်တွေ တထုတ်ထုတ်နဲ့ ပန်းထွက်သွားတယ် ။ အား..အင်း…… ဖိမထားနဲ့ကွာ… နဖူးက ချွေးပေါက်တွေ တတောက်တောက် ကျသွားတယ်…… ဦး…..တကယ်ဆိုးတယ်ကွာ……မီးက အပျိုစစ်စစ်..ဒါ ပထမဆုံး…..ဟင့်ဟင့်…. အေးမိ ပုလဲခနေပြီ…. မျက်ရည်ပေါက်ကြီးတွေ ဆက်တိုက် ပါးပြင်လေးပေါ် ကျလိမ့်ဆင်းနေတယ်….. ဦးနည်းနည်းမှားသွားတယ် သမီး… ဘာ…… အေးမိ ဆတ်ကနဲ ထလိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်က ဆင်းပြေးသွားတယ်…..ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ဘဲ ထပ်ခိုးပေါ်က ဆင်းသွားတယ်…… ဟူး….. ငါ ဒီအိမ်မှာ ဆက် မနေသင့်တော့ဘူး…… အေးမိ မော်ကြီးကို ရှောင်နေတယ်…. သူဌေး နိုင်ငံခြားက ပြန်ရောက်လို့ မော်ကြီး အလုပ်များနေတယ်…..သူဌေးနဲ့ မဲဆောက်ဖက်ကို လိုက်သွားရတယ်…..ငါးရက်လောက် ကြာသွားတယ်…..အေးမိကို တအား သတိရနေတယ်… တွေ့ချင်နေတယ်..သူ့ဖုန်းကို ခေါ်ကြည့်တာ မကိုင်ဘူး ။
အိမ်ကို ပြန်လာတော့ ညဉ့်နက်နေပြီ ။ သူ့ကားသံကိုကြားတော့ မသက် ထွက်ကြည့်တယ် ။ မော်ကြီး..ထမင်းစားပြီးပလား…..လာစားလေ..ဒို့ ဟင်းတွေ ယူလာတယ်…အေးမိကတော့ အစားမစား အခန်း တံခါးပိတ်ပြီး နေနေတာ ငါးရက်လောက် ရှိပြီ…ဘာဖြစ်နေသလဲတော့ မသိဘူး..ရည်းစားကွဲ အသဲကွဲနေသလား မသိဘူး…..ဟင်းဟင်း….. မသက် အတင်းခေါ်လို့ သူတို့ ထမင်းစားခန်းထဲက စားပွဲမှာ မသက်နဲ့ အတူသွားစားလိုက်ရယ် ။ မသက်က ထုံးစံအတိုင်း အိမ်နေရင်း ဘရာစီယာ မပါဘဲ စွပ်ကြယ်လို ဟာကို ၀တ်ထားတော့ သူ့ရင်သားစိုင်ကြီးတွေက တုန်နေတယ် ။ လှုပ်နေတယ် ။ ကိုဇော်ဝိတ်…စက်ာပူ ခဏသွားတယ်…..လေးရက်လောက် ကြာမယ်….မော်ကြီး…. မသက်နဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ နေနေရတာ စိတ်တွေ ထကြွလာတယ် ။ ဖင်ကားကားကြီးတွေကလည်း တုန်ခါနေတယ် ။ ဂျေလိုးလို ဒီဇိုင်းမျိုး…. မြင်တာနဲ့ လီးတောင်သွားရတဲ့ ကိုယ်လုံး…. ကားဂိုဒေါင် ထပ်ခိုးပေါ်ကို သူ ပြန်ရောက်လာတော့ သူ့ဖွားဖက်တော်က မသက်ကြောင့် မာတောင် ကြီးထွားနေတယ်။ ၀ှူး……ရင်ထဲမှာ ပူလောင်နေတယ်…..ရေချိုးပစ်လိုက်မှဘဲ…. ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေကို အကုန်ချွတ်လိုက်ပြီး ရေချိုးပစ်လိုက်တယ်…..ရေပန်းအောက်မှာ မျက်လုံးမှိတ်ထားပြီး ရေပူပူတွေ တဖွားဖွားကျနေတာကို ခံနေတဲ့အချိန် ခြေသံလိုလို ကြားလိုက်ရ လို့ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်မိတယ်…. ဟင်..မသက်…. မသက်က ကိုယ်တုံးလုံးကြီး…..အား…..သူ့ကို အနောက်ကနေ လာဖက်တယ်…..ရင်သားကြီးတွေက အိကနဲ လာထိတယ်…. မသက်ရဲ့ လက်က သူ့ကိုယ် အနှံ့ကို ပွတ်နေတယ် ။ ကိုင်နေတယ် ။ သူ့လည်ဂုတ်ကို လျာနဲ့ ယက်တယ် ။ ငေါငေါကြီး ထောင်နေတဲ့ လိင်တန်ကို ဆုပ်ကိုင် ပွတ်တိုက်နေတယ် ..။ စိတ်တွေ လွတ်ထွက်သွားတယ် ။ မသက် နှုတ်ခမ်းတွေကို ငုံစုတ်ပြီး မသက် ပေါင်ကြားကို သူ ဖမ်းကိုင်လိုက်တယ် ။ ရေချိုးခန်း နံရံမှာ လက်ထောက်ခိုင်းပြီး အနောက်ဖက်ကနေ မသက် ခြေထောက်တွေကို ချဲကားလိုက်ပြီး မသက်ကို ထည့်တယ် ။ မသက် အော်လိုက်တဲ့အသံက တော်တော် ကျယ်တယ် ။ စိတ်ရှိလက်ရှိ ဖိဆောင့်ထည့်လိုက်မိတယ် ။
ဖေါက်ဖေါက်ဖေါက်ဖေါက်…. အိုး…အိုး…….အား….အား……အား…….. ဖပ်ဖပ်ဖပ်ဖပ် ဖပ်ဖပ်ဖပ်ဖပ်ဖပ်…… အိုး…..အီး…..အင်း……… ရေချိုးခန်းထဲကနေ ကုတင်ပေါ်ကို ရောက်သွားတယ်……မသက် သူ့ကို ပုလွေမှုတ်ပေးတယ်…..ပြီးတော့ သူ့အပေါ်ကို ခွတက်တယ်…….အိပ်မက်မက်နေသလိုဘဲ…..သူ ဇော်ဝိတ်အအပေါ်မှာ နောက်ကျောကို ဓါးနဲ့ ထိုးမိပြန်ပြီ….. မသက်ကို ဖင်ပူးတောင်းထောင်ခိုက်းပြီး သူ အသားကုန် ဆောင့်ထည့်ပစ်ရင်း ပြီးသွားတယ်….လိင်တန်ကို တဆုံး နှစ်ထည့်ထားပြီး သုတ်ရည်တွေ ပန်းထုတ်ပစ်မိနေတဲ့အချိန် တံခါးပေါက် က အသံကြားလိုက်လို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်… ဟင်….. ဦးဦး…နည်းနည်း မှားသွားပြန်ပြီလားဟင်….. မျက်ရည်တွေ ကျပြီး တုန်ခါနေတဲ့ အသံလေးနဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ အေးမိ ….. ပြီးပါပြီ။